Wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo ka jawaabtay eedeyn uga timid maamulka Hirshabeelle | Star FM
Home Wararka Soomaaliya Wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo ka jawaabtay eedeyn uga timid maamulka Hirshabeelle
Wasaaradda maaliyadda Soomaaliya oo ka jawaabtay eedeyn uga timid maamulka Hirshabeelle
Wasaaradda Maaliyadda ee xukuumadda xilgaarsiinta Soomaaliya ayaa ka jawaabtay eedeyn uga timid maamulka Hirshabeelle oo ay ku sheegeen inay xayirtay lacago loogu tala galay wax ka Qabashada Fatahaada wabiga Shabeelle.
War kasoo baxay Wasaaradda Maaliyadda Soomaaliya ayaa lagu sheegay in Wasaaradda Maaliyadda ee DFS, aragtay war saxaafadeedka ka soo baxay Guddiga Maamulka Hirshabelle ee maaraynta musiibooyinka kuwaasoo eedo u jeediyay wasaarada ayna halkaan ku cadaynayso sida ay u socdaan hawlaha ka hortagga fatahaadaha ee Mashruuca Ka soo kabashada Masiibooyinka (SCRP) ka waddo Dawlad Goboleedka Hirshabelle.
Waxaa diyaar ah 10 qandaraaslayaal (contractors ) oo hawlgeli doona usbuuca soo socda: 6 shirkadood oo ka howlgali doonna Beletwayne iyo 4 ka howlgali doonna Jowhar iyo nawaaxigeeda. Wasaaradda Maaliyadda ee DFS waxay sidoo kale sheegtay inay dhibaatada fatahaadaha la qaybsanayso Dowlad Goboleedka iyo shacbiga reer Hirshabelle.
Ayna dadaal badan ugu jiraan dardargelinta hawlaha Mashruuca Ka soo kabashada Masiibooyinka (SCRP) uga qorshaysan degmooyinka Maamulka Hirshabelle nee taga ee markasta uu Wabiga shabeelle Fatahaada ka Sameeyo.
Wasaaradda Maaliyadda dowladda dhexe ee Soomaaliya ayaa cadeysay inaysan jirin wax dhaqaale ah oo ay ka xayirtay Maamul Goboleedka Hirshabelle, ayna sida ku cad qorshaha Mashruuca Ka soo kabashada Masiibooyinka (SCRP) ay howluhu u socdaan sidii loogu talagalay.
Wasaaradda Maaliyadda DFS ayaa guddigga Ka hortagga Fatahaadda ee Hirshabelle ka codsatay inay caddaymo ka bixiyaan lacagaha ay ku eedeyeen in doiwladda dhexe ka xayitray wax ka qabashada fatahaadda Degaannada Hirshabelle
Hoos ka akhiso war saxaafadeedka wasaaradda maaliyadda Soomaaliya
Previous articleDHAGEYSO:Mombasa oo maanta laga ciidaya
Next articleWafdi dowladda dhexe ka socda oo Gaalkacyo gaaray